पोखराका एक किसानले भालेको मुल्य २ लाख पाउँदा पनी किन बिक्री गरेनन् ? भालेले सबै कुखुरा बोलाएर भाषण दिन सम्म सक्छ – PathivaraOnline
Home > समाचार > पोखराका एक किसानले भालेको मुल्य २ लाख पाउँदा पनी किन बिक्री गरेनन् ? भालेले सबै कुखुरा बोलाएर भाषण दिन सम्म सक्छ
admin January 3, 2019 समाचार	1
कतै आकाशमा चिल घुम्यो भने सबै कुखुरालाई खबर गर्छ, कुनै कुखुरा हरायो भने पनि खोजेर ल्याउँछ । यो बीउको लागी पालेको र यसको बीउ उत्पादन गर्न बिभिन्न संघसंस्था आएर २ लाख दिदाँ पनि नदिएको संचालक अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार यो भालेले बार्षिक २० लाख भन्दा बढी आन्दानी गराईरहेको छ । २ लाखको भाले हेर्नको लागी र पशुपंक्षिबारे अनुसन्धान गर्नको लागी उनको फार्ममा मन्त्रीदेखी सर्वसाधरणको घुईचो समेत हुन्छ । पोखराको लेखनाथ स्थित डाँडाको नाकमा रहेको उनको फार्म पछिल्लो समय लोकल कुखुरा, क्रस, लुइँचे, बनराजा, हाँस लगायत पशुपंक्षिका लागी परिचित बन्दैछ । हेरौं यो २ लाख पर्ने भालेको बारेमा कृषक राजेन्द्र अधिकारीकै फर्ममा पुगेर लिएको अन्तरवार्ता ।
विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको यस्तो छ चाहाना !
One thought on “पोखराका एक किसानले भालेको मुल्य २ लाख पाउँदा पनी किन बिक्री गरेनन् ? भालेले सबै कुखुरा बोलाएर भाषण दिन सम्म सक्छ”
Нello! I could have ѕworn I’ve been to this website bef᧐re Ьᥙut acter looling atafew of the
posts I realizeԀ it’s neww to me. Anyhow, I’m definitely happy I stumbled upon itt and I’ll be book-marking it and